ဆိုလာ photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ထူးခြားသော အားသာချက်များစွာရှိသည် - သတင်း - Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd.
1. နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် ကုန်ခန်း၍မကုန်မခန်းနိုင်သော သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး၊ဆိုလာ photovoltaicဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး စွမ်းအင်အကျပ်အတည်းနှင့် လောင်စာဈေးကွက်တွင် မတည်မငြိမ်အချက်များကြောင့် ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
2. နေရောင်ခြည်သည် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ထွန်းလင်းနေပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို နေရာတိုင်းတွင် ရရှိနိုင်သည်။ဆိုလာ photovoltaicလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အထူးသဖြင့် ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများအတွက် လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် သင့်လျော်ပြီး တာဝေးဓာတ်အားလိုင်းများ တည်ဆောက်မှုနှင့် သွယ်တန်းထားသော ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
3. နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည် လောင်စာဆီမလိုအပ်ဘဲ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာလျှော့ချပေးသည်။
4. ခြေရာခံခြင်းအမျိုးအစားအပြင်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ရွေ့လျားနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများမပါရှိသောကြောင့် ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူပါ၊ တပ်ဆင်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူပြီး ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူပါသည်။
5. ဆိုလာ photovoltaic လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းသည် မည်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ မထုတ်လုပ်နိုင်ဘဲ ဆူညံသံများ၊ ဖန်လုံအိမ်များနှင့် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များ ထွက်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် စံပြသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 1KW photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ် တပ်ဆင်ခြင်းသည် CO2600ï½ž2300kg၊ NOx16kg၊ SOx9kg နှင့် အခြားအမှုန်အမွှားများကို နှစ်စဉ် 0.6kg မှ လျှော့ချနိုင်သည်။
6. အဆောက်အဦ၏ခေါင်မိုးနှင့်နံရံများသည် မြေနေရာများစွာကို သိမ်းပိုက်ခြင်းမရှိဘဲ ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆိုလာပါဝါပြားများသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို တိုက်ရိုက်စုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် နံရံနှင့်အမိုးများ၏ အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးကာ အိမ်တွင်းလေအေးပေးစက်များ၏ ဝန်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ;
7. ဆောက်လုပ်ရေးကာလနေရောင်ခြည်photovoltaic ပါဝါထုတ်လုပ်မှုစနစ်သည် တိုတောင်းပြီး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် ရှည်လျားသည်၊ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်နည်းလမ်းမှာ အတော်လေး လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်၏ စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူသည့်ကာလသည် တိုတောင်းပါသည်။
8. ၎င်းကို ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုသည့်နေရာအနီးတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်သည်။